Họtelu ndi di na Aba, Abia State - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Obodo Aba bu nke amara maka nkà orụ aka, ọtụtụ ndị na ebe a bu ndị na ebi ndụ dị ka ndi ọrụ nkà na-eji ume na aru-ọrụ akwa, mkpuru ogwu na ihe epekele roba.
Site na mgbe ekeputara Abia Steeti na afo 1992, onwetawo mbawanye di ukwu na onu ogugu nke igwe mmadu di otu nde na iri puku abụọ narị itoolu (1.020, 900). Bu nke nwere obodo ndi agbata obi gbara ya gburugburu bu ndị dị ka Obudu - Aba, Aba- Ukwu, Umuokpoji - Aba na Eziukwu Aba. Ọ bu nke amara maka ebe mkpuru akumaku m’nweta nke oru ubi ya bu nke ndi mba British mere ka o nwe njikọta rue na mba Port Harcourt na afo 1901.
Ebe Njem Nleta di na Aba
Lee ogige di ịtụnanya nwere agba oji na na bu nke akpọrọ “Arusi Ogologo nke Arochukwu”, ogige a n'egosi oge nke ahịa igba ohu, n'oge ahụ ekwuru na tupu ndị nna ukwu nke ahia ohu a bia na ụgbọ mmiri ha; ihe ọwara ogologo a buru nke e ji na edozi esemokwu n'etiti obodo na ododo ndị nwere esemokwu.
Gaa Leta mmiri Azumini nke na acha anụnụ anụnụ nke apkoro (Azumini Blue River) na okwu beeke, ị ga enwe ihe egwu, o nwere agba amuma ịtụnanya nke ime miri oké osimiri na enwetụ anyanwụ na-atụgharị na ya. Ebe njem nleta a na-adọta ọtụtụ ndi njem nleta na esi na obodo Nigria na obodo mba ofesi na a bia na ya. ọgba osisi (wooden cave) nke Amakama bụ ebe ogige nleta ọzọ a na apughi ichezo, ebe a bụrụ otu n'ime ebe tara ochichi a na-ezo na n'oge agha na kwa n’oge nke ahịa ohu, ọ bụ nke buru ibu nke ukwuu nwere ike ikpuchi mmadụ iri abuo na onu miri-emi, bu nke a arughariri ugbu a I bu ebe ogige njem nleta, ọ bụ ebe nleta di nma nke ukwu maka I ga nleta n’afo nile. Ugboala Ime njem nke Ohaneze
Ọ bụrụ na ị emeghị nhazi maka ụgbọ ala nke onwe, ị ga- eji usoro ugboala ime njem di mfe na Aba, Ụgbọala bọs na Keke Napep ogba tum tum nwere ukwu ato nke na-aga site naira iri ise rue na otu nari naira, Ị ga-ahụ ugboala tagzi I ga akwu-ugwo ya maka ofu onye njem na họtelu ndi di na Aba bu ndi dị ka Luxury City Họtelu na ole na ole ndị ọzọ Ọtụtụ n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Aba na esi nri obodo Nigeria pụrụ iche dị ka Ofe Egusi, Ofe Onugbo, Ofe Okazi na Ofe Oha bu nke a na enye ya na nri nyochasi witi ọka.
Ị kwesịrị ị ga nwale ụlọ oriri na ọṅụṅụ Jevinik nke di na okporo uzo Brass nke Aba north, ha na-enye nri obodo Nigeria na nke mba ofesi site na nari naira ato, enwekwara ụlọ nri ngwa ngwa ndị ọzọ bu ndi dị ka Mr Biggs, Apples fried chicken na ulo ebe mmepụta Ọka agbara agba.
Họtelu na ụlọ ahịa ndi di na Aba
Onu ahia maka otu onu ụlọ di nma nke ukwu nwere ọkọlọtọ na Villa Roy Họtelu and Suitesbu nke di site na puku naira itolu bu nke nwere ihe nile ị na achọ na họtelu nke ga a di ka inoo n'ụlọ, họtelu a nwere ime ụlọ ndi ahaziri nke oma nwere otutu ohere na ya bụ otu n'ime họtelu ndi kasị nma na Aba, nwerekwara ihe nweta ozi na ikuku nke komputa na aru oru nke oma bu nke a na akpo ( high speed internet) na okwu beeke, ebe igwu mmiri di ọcha buru ibu nke ukwuu di ka nke eji eme azumpi imaka egwuruegwu nwere nche-anwu na mpaghara akuku ebe odi.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ a na esi ma na enye kwa nri na ato uto nke ukwuu nke i na aghaghi iri tinyekwara ndi oru ha azụrụ azụ nke oma. Ewuru Ụlọ oriri na ọṅụṅụ a na okporo ụzọ Immaculate na ekwo-ekwo, Benidon Họtelu and Resort na enyekwa ezi ihe ndi eji ebi ndu na họtelu ndi di nma kari nke ndi ọ bụla ọzọ, Ihe igwe nkà mgbatị ahu oloro ohu na nke akpu-obi, ọkụ eletrik na esepughi aka na ndi nche.
Onu ahia maka otu onu ụlọ ha bu malite na puku naira ano rue na puku naira iri na ato. E nwere ọtụtụ ụlọ ahịa ebe dị ka ahia ukwuu Ekeoha(Ekeoha shopping Plaza) ebe ị pụrụ izuta uwe, akwa, ngwá eletronik na ihe ndi ọzọ, buru kwa nked ị nso na Ụlọ Nzukọ nke obodo ndịda Aba (Aba town Hall, Aba South) nwekwara okporo uzo di nma . N'ebe ndị ọzọ bu Eziukwu na ahịa ukwu Ariria nke mba uwa (Ariria International Market).Gụkwuo